विपन्नको प्रश्न– पाँच किलो चामलले कति दिन खानु सरकार ? « Loktantrapost
विपन्नको प्रश्न– पाँच किलो चामलले कति दिन खानु सरकार ?
४ बैशाख २०७७, बिहीबार १६:३०
मेचीनगर। भद्रपुर–५ स्थित नयाँबस्तीका विपन्न परिवारलाई अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ पर्न थालेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि कामविहीन भएसँगै उनीहरुको दैनिकी अहिले कष्टकर बन्दै गएको हो । यहाँ करीब ३५ परिवारको बसोबास छ । उनीहरु सबैको आम्दानीको स्रोत ज्याला–मजदुरी हो ।
‘लकडाउन भएको केही दिन त घरमा भएको पैसाले खाइयो’, उनीहरु भन्छन्, ‘बाहिर निस्किन मिल्दैन, काम नभएपछि के गरी खानु, दिनरात चिन्ता यही कुराको छ ।’
अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा नयाँबस्तीबासीले थोरै राहत सामग्री पाएका छन् । लकडाउन घोषणा भएको आज २४ दिनका अवधिमा उनीहरुले पाँच केजी चामल, एकएक केजी दाल र नून, आधा लिटर तेल र एउटा साबुन मात्र पाएका हुन् ।
‘चार÷सात जनाको परिवारलाई पाँच केजी चामलले के हुन्छ ?’, स्थानीयवासी पूर्णिमा शर्मा भन्छिन् । यहाँका बासिन्दाले भने लकडाउनको पूर्णपालना गरिरहेको उनी बताउँछिन् । जरुरी कामबाहेक कोही घरबाट ननिस्कने गरेको र काम पर्दा मात्र जाने गरेको उनले बताइन् ।
छिमेकी वडा नं। ८ नम्बरले पहिलो चरणमा २७० परिवारलाई राहत दिएको छ । प्रतिपरिवार सात केजी चामल, दाल, नून एकएक केजी, एक लि तेल र एउटा साबुन दिइएको वडाध्यक्ष गौरव सुब्बाले जानकारी दिए ।
सन्तोष शर्मा (रासस)
एकीकृत समाजबादीको सिफारिसमा मन्त्री हेरफेर
झापा, १२ असार । नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री परिवर्तन भएका छन् ।
मनषा थाइफुड्सले पायो बीमा वापतको पेश्की रकम
झापा, १२ असार । पाँच महिनाअघि आगलागी भएर ध्वस्त भएको चाउचाउ उत्पादक कम्पनी मनषा थाइफुड्सलाई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले